Att föda barn i Värnamo - somaliska - 1177
Att föda barn i Värnamo - somaliska
Canug ku dhalid Värnamo
Att föda barn i Värnamo - somaliskaThe content concerns Jönköpings län
Sidan baa la suubin markii canug lagu dhali Värnamo, oo kamid saddexda meel oo qeybta foosha oo gobalka Jönköping.
Saddexda meel oo qeybta foosha oo gobalka ku yaal si dhow bey u wada shaqeeyan sidey si kalsooni iyo wanaagsan u gacan qabtan dadka hooyooyinka noqon iyo carruurta. Caadiyan adiga waxaa ku foolan isbitaalka kuu dhaw.
Inta aadan soo aadin isbitaalka, soo wac markasto koow qeybta foosha sidaa ula tashatid ummuliso, oo la socoto waxa ku qoran buugga caafimadka oo daryeelka dumarka iyo idiin sii diyaarin qaabilad wanaagsan. Haddii tiro aad u badan isla markas ey ku foolan isbitaalka kuu dhow, fadlan waxaa markas ku dhali karta labada isbitaal oo kale midkood – isbitaalka Eksjö ama Isbitaalka gobalka[Länssjukhuset] Ryhov oo Jönköping.
Marka qeybta foosha aad imaatid waxaa la qiimeyn daryeelka aad u baahantahay oo waxaa qiimeyn ummuliso iyo marmar dhakhtar.
Anaga waa ku da’daali inaa baahidaada iyo baahida qofka aad nooshahay wax ka qabano inta foosha socoto iyo kaalmo shaqsiyan baa idin siin. Anaga waxaa meesha ka dhigi meel kalsooni leh iyo adiga ku caawin inaa isdabcisid, maadaama ey muhiim u tahay foosha. Foolkasto waa qaas iyo xanuunka isku si ma loo dareemo. Ummulisada iyo kaalmeeyaha kaalkaalisada adiga iyo qofka aad wada nooshahiin bey caawin inta foosha socoto oo dhan, oo weey idinla joogi, kaalmeyn iyo idin siin warbixin sidaa u dareemikartiin kalsooni.
Xilliga maalmaha marka aad imaaneysiin qeybta foosha waxaa ugu fudud inaa ka soo gashiin dhinaca koonfurta isbitaalka oo baabuurta la dhigto oo bilaa kharash la’aan ah. Inta u dhaxeyso saacadaha 20:00 ilaa 06:00 waxaa koow tageysid qeybta degdega marka aad imaaneysiin qeybta foosha.
Adiga waxaa horey usoo qaadan:
qorshaha naas-nuujinta (oo ku siisay qeybta daryeelka dumarka)
Kaarka aqoonsiga (liisinka baabuurka, baasaboor ama wax lamid ah)
Haddii aad gobalkale ka imaatid waa in adiga horey usoo qaadatid buuka caafimaadka daryeelka dumarka.
Cunto iyo cabitaan - Mat och dryck
Adiga oo canug dhali waa lagu siin wax aad cuntid iyo cabtid laakin qofka wada nooshahiin/ehelka waa iney horey usoo qaatan ama ka iibsadan qeybta foosha.
Xilliga maalmaha idinka waxaa ka cunikartiin biibitada isbitaalka ama qolka cuntada. Idinka waxaa xita dalbankartiin qado ama casho. Qeybta foosha waxaa yaal qaboojiye, tallaajad iyo mashiinka cunto kuleeliyaha haddii aad dooneysin inaa cunto iyo cabitaan horey usoo qaadatiin. Kafee, shaah iyo shukulaat waxaa laga iibsankara qeybta foosha.
Qeybta foosha oo BB - På BB-avdelningen
Marka aad foolatid kadib waxaa isla wada tageyna qeybta BB. Meeshas adiga waxaa ka heli caawinaad iyo talooyin ku saabsan naas-nuujin, hurdo, daryeelka canuga, wakhtiga koowad aad guriga isla joogtiin iyo xaalada cusub oo waalidnimada. Haddii qeybta boos ka bannaanyahay qofka kula nool wuu kula seexankara habeenka koowad.
Ilaa inta aad joogeysin BB waxey ku xirantahay daryeelka aad u baahantahay, laakin fool caadi ah qofka wuxuu joogi inta u dhaxeyso 6 ilaa 48 saac. Marka aad guriga aadin kadib idinka waxaa xiriir la lahaaneysiin BB oo telefoon ahaan iyo booqasho ugu soo noqoneysiin 3 ilaa 5 kadib foosha kadib.